M/weynaha oo hambalyo Ciidul Adxa u diray shacabka Soomaaliyeed (VIDEO) – idalenews.com
M/weynaha oo hambalyo Ciidul Adxa u diray shacabka Soomaaliyeed (VIDEO)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamud ayaa dhammaan shacabka Muslimiinta ah, gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan u direy hambalyada Ciidul Adhxa oo maanta caalamka oo dhan looga dabaaldegayo.
Madaxweynaha ayaa yiri “Hambalyo, Hambalyo, Hambalyo, dhammaan shacabka Soomaaliyeed ku ciida farxad iyo reynreyn. Munaasabadan qiimaha badan aan soo wada dhaweyno oo aan deriska iyo inta aan wax heysan aan xasuusanno. Shacabku waa inay caruurta ka farxiyaan oo la geeyaa goobaha ciidaha, ama ay soo salaamaan deriska iyo qaraabada. Shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waa inay gacmaha is-qabsadaan oo ay si wadajir ah u wada ciidaan, una kaalmeeyaan wallaalahooda aan wax heysan, gaar ahaan carruurta deriska fiiro gaar ah haloo yeesho si ay maalinta farxadda u wada ciidaan.”
Madaxweynahu waxuu yiri “Dhammaan Muslimiinta gudaneysa waajibaadka xajka, gaar ahaan Soomaalida EEBBE ha ka aqbalo xajkooda, ducadoodana noo aqbal.”
Madaxweynahu waxuu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay ka wada shaqeeyaan nabadda, iyo dib-u-heshiisiinta, si dalka uu u noqdo mid horumar ballaaran sameeya. Farxadda Ciiddana waa mid nooga baahan inaan isu naxariisano, danteenna guudna ka wada shaqeyno.
Alle maanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan, Illaahii na siiyey isagaa ku abaalle, alla maanta iyo maanta si wanaagsan u ciidda.
[vsw id=”gt2IErYtDUA&feature=player_embedded” source=”youtube” width=”425″ height=”344″ autoplay=”no”]
Afhayeenkii burcadbadeeda ee Biljumka lagu xiray oo lagu soo xero galiyay in uu filim ka sameynayo burcad-badeedda
Daawo Qabashadii Madaxii Burcad Madeedka Afweyne oo caalamka aad looga hadal hayo